I-Complete Victorian Bulldog Breed Information & Umhlahlandlela Womthengi - Izinhlobo
Ukuhlukahluka okukhethiwe kwe-English Bulldog eyaziwa kakhulu, iVictorian Bulldog uhlobo olunempilo kakhulu olunakho konke okuthandekayo kwalowo owandulelayo.
Baqale bakhuliswa nguKen Mollett ngomzamo wokubuyisela i-English Bulldog kwifomu yayo ende, eqinile kuma-1800s.
Ngokufishane, okuyindilinga, futhi okushwabene iVictorian Bulldog inokubukeka kwesibindi ongeke ukwazi ukukuthanda kodwa ukuthanda.
Ubuso babo obukhathazekile bungabonakala busabisa , kepha bayizinja ezimnene kakhulu ezenza izilwane ezifuywayo ezinkulu zomndeni.
Ukugcinwa okuphansi kakhulu futhi kunenhliziyo enhle, lolu hlobo lufanelekile kunoma ngubani ofuna umngane ongena kalula.
Uma unesifiso sokuletha ekhaya enye yalezi zinja ezi-quirky, qhubeka ufunda ukuthola konke odinga ukukwazi ngomlando wazo nezidingo zokunakekelwa.
UVictorian Bulldog - Imvelaphi yokuzalwa nokubuka konke
Imidlwane yaseVictorian Bulldog
UVictorian Bulldog Temperament
Ukubukeka kweVictorian Bulldog
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Victorian Bulldog
Okhokho bale nja yamaVictorian babesetshenziselwa imidlalo esabekayo njengokubhaka izinkunzi, kepha le canine ijabulisa kakhulu ukuba yingxenye yomndeni.
Yize ukubukeka kwawo oku-burly nomzimba wemisipha kungasho okunye, i-Victorian Bulldog uyinja ehambisana nayo ngokungapheli.
Ngenkathi benza kahle kakhulu ezindaweni ezinesimo sezulu, kungabikho ukushisa okukhulu noma amakhaza , lezi zinja zijwayela kahle impilo yezwe noma yedolobha uma nje zingasetshenziswa njalo.
Lapho lolu hlobo lungeyona indawo yokuzulazula, noma ukuzihlalela nomndeni, benza izinja eziqaphile; amazinyo amakhulu namagxolo ajulile aqinisekile ukwenza noma ngubani ongangenayo acabange kabili ngokungena.
Ngeshwa, UVictor Bulldogs ayikaziwa okwamanje yiKennel Club enkulu , ngakho-ke abanakho ukuhlukaniswa kohlobo lwendabuko. Uma ikwenzile, kungenzeka ukuthi ibe seqenjini elingadlali ezemidlalo; njengomzala wayo we-English Bulldog.
Lokhu kungenzeka kakhulu ngoba luhlobo lwakamuva kakhulu futhi olungavamile.
UKen Mollett kuphela yaqala ukuzala le canine ngawo-1980 , ngakho-ke abakakutholi ukungaguquguquki okudingekayo ekubukekeni nasesimweni sokuthola ukuqashelwa kwanoma iyiphi iklabhu yekennel.
Njengamanje, kunokubhaliswa okumbili kuphela okuvuma lolu hlobo:
I-American Canine Association
Kunezinhlangano eziningi zokutakula zeBulldogs, kufaka phakathi iBulldog Rescue Network.
Kodwa-ke, ukuze uqiniseke ukuthi umngane wakho omusha uyiVictorian Bulldog eyiqiniso, kuzodingeka wenze ucwaningo olubalulekile kumfuyi noma uluthenge ngqo emndenini womfuyi wokuqala e-UK (ngaphezulu kulokhu ngezansi).
Ukufunda ngemvelaphi yeBulgog yaseVictorian, kudingeka sibheke umzala wayo; i-English Bulldog.
Ngeshwa, imizimba yabo emifushane, enesithukuthezi nemibimbi ebabazekayo inegalelo ekwehleni kwezempilo okuphelele kohlobo.
Ukufunwa okuphezulu kanye ukwanda kokuzalela kuholele kuzimpawu zehaba lokho kudale izingqinamba eziningi zezempilo, kufaka phakathi ukutheleleka kwesikhumba, izinkinga zokuphefumula, kanye nokukhubazeka kwamathambo ukubala okumbalwa.
UKen Mollett, umdlandla waseLondon, wayefuna ukukhiqiza i-English Bulldog enempilo, nezemidlalo ngakho-ke wasungula iVictorian Bulldog ngokukhwelana:
I-Staffordshire Bull Terriers
Ususele lolu hlobo olusha ngemuva kwamaBulldogs wendabuko ama-1800s ayemade kancane, enempumu ethe xaxa, nemibimbi engajulile.
AmaVictorian Bulldogs afunwa kakhulu, kepha ayivelakancane kakhulu, asanda kungena eMelika kule minyaka eyishumi edlule.
Ithebula lamaqiniso we-Victorian Bulldog
Usayizi Amasentimitha ayi-16 kuye kwayi-18 kwabesifazane nama-intshi ayi-17 kuye kwayi-19 kwabesilisa
Isisindo I-55 iye ku-65lb yabesifazane kanye nama-65 kuya ku-75lb kwabesilisa
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-12 kuya kwengu-14
Uhlobo Lokuzala Iqembu Elingeyona Ezemidlalo
Inhloso Inja Yomngane
Ifanele i- Imindeni Noma Abanikazi Abangabodwa
Umbala Olubomvu, oMhlophe, uBrindle, noma uFawn
Isimo Ukuzola, Ukudlala, Ukwethembeka, Nobungane futhi Mnene
Amanye Amagama UKen Mollett uVictorian Bulldog
Njengoba lolu wuhlobo olusha, kungaba inselele enkulu ukwamukela noma ukuthenga.
Abafuyi abaningi bakhangisa ngokungafanele izinja zabo njengeVictorian Bulldogs lapho benjalo nje ama-Bulldogs ama-English nzalo .
Osayizi be-Litter basuka phakathi kwemidlwane emithathu kuya kweyisithupha futhi ungalindela ukukhokha noma kuphi phakathi kuka- $ 1,300 no- $ 2,000 USD ukuletha injana yase-Victorian Bulldog.
Imidlwane izosinda cishe amakhilogremu ayi-10 emavikini la-8 budzala , lapho sebelungele ukuya emakhaya abo amasha.
Kuzobathatha noma yikuphi ukusuka eminyakeni engu-1 kuye kwengu-2 ukufinyelela usayizi wabantu abadala nesisindo sabo; ngaleso sikhathi ukwakheka kwamathambo nemibimbi kuzoshintsha kakhulu:
Ishadi Lokukhula Kwabadlwane laseVictorian Bulldog
Ubudala (izinyanga) Isisindo (lb)
Lolu wuhlobo olukhula kahle futhi ludinga ukunakwa kuwo wonke umuntu abahlangana naye.
Ngenxa yalokho, uma ishiywe yodwa isikhathi eside kakhulu zingabhubhisa futhi uhlafune ifenisha noma ushiye ubuxhakaxhaka endlini yonke.
Uma ungenaso isikhathi esiningi sokunikela, iVictorian Bulldog ayilona uhlobo lwakho.
Yize ngokuvamile ithule futhi igodliwe, le nja inegxolo elisabisayo abazolisebenzisa ukukuxwayisa nganoma yisiphi isenzo esisolisayo, noma ngabe kuyisilwane esingamukeleki egcekeni noma umhlaseli wasekhaya.
Ama-Bulldogs ama-Victorian awanayo idrayivu yokudla, njengezinye izinhlobo , kepha basathambekele ekujaheni isibankwa noma ingwejeje engena endaweni yabo.
Lolu hlobo lungavikela umndeni walo, kodwa akufanele kube nolaka ngaphandle kwesizathu .
Ukuvimbela ukuhlukunyezwa, ukuxhumana nabantu kusenesikhathi nokuqeqeshwa kuyadingeka ukuqinisekisa inja elalelayo nezolile kunoma yisiphi isimo.
Ngenkathi amaVictorian Bulldogs emnene ngokwedlulele nemindeni yawo kanye nezivakashi, bayizinja zokuqapha eziphumelelayo.
Lezi zinja zikwazi ukuhlukanisa kusuka kumuntu ongenayo noma isivakashi futhi zingaqeqeshwa ngisho nokukubona futhi zikuxwayise ngezinsongo ezithile.
IVictorian Bulldog ngumdlwane ophilayo, nokho onesithunzi okwenzela noma yini.
Yize bengenawo amandla adingekayo okunyuka isikhathi eside ngaphandle, lolu hlobo luhlala lulungele ukuzijabulisa.
Isimo sabo sokudlala nokwakha okuqinile kubenza babe abadlali abadlala kahle kakhulu ezinganeni ezindadlana, futhi bakulungele ukuba mnene nokuzola ezinganeni ezincane futhi.
Lapho lolu hlobo lungadlali noma lusukela izingwejeje egcekeni, uzobathola bevilapha usuku lokuhamba kusofa noma uzama ukusonga ethangeni lakho!
Lapho wethula inja yakho emndenini, ungathola ukuthi badonswa ngokushesha kunoma yiziphi izingane.
Ama-Victorian Bulldogs enza izilwane ezifuywayo ezinhle zomndeni futhi ngizochitha yonke imizuzu ukungena kuma-antics namalungu omndeni amancane.
Yize kungafanele neze ube nezinkinga ngodlame, kubalulekile ukufundisa izingane ezincane imingcele nemikhawulo yokugcina inja yakho ikhululekile futhi ijabule.
Bahle ekwenzeni ubungane nezilwane abahlangana nazo, kungaba ezinye izinja noma ngisho amakati. Ukuqala ukwethula inja yakho ezilwaneni eziningi ezintsha ngangokunokwenzeka ekuqaleni kuyisihluthulelo sokuthuthukisa amakhono omphakathi.
Sekukonke, lolu wuhlobo oluguquguqukayo oluzojabulela ukuhlangana nelungu ngalinye lomndeni.
Lolu hlobo lufana ne-English Bulldogs (esesithombeni) eduze kakhulu ngokuhluka okumbalwa okusemqoka: zingamayintshi ambalwa ubude, zinemibimbi embalwa futhi engajulile, ikhanda elincanyana, nephunga elide.
Ama-Victorian Bulldogs abonakala ngesiqu sawo esifushane kepha esinemisipha.
Njengoba lolu hlobo lungaqashelwa yinoma iyiphi iklabhu enkulu yasesibayeni, indinganiso yokuzalanisa ibekwe nguKen Mollett futhi ilandelwa yilabo abazalanisa izinja njengamanje.
Ngokwengeziwe, amazinyo ale Bulldog Akufanele kuhlangatshezwane nomshoshaphansi futhi imizimba yabo kufanele incike futhi ingalokothi iboleke nganoma iyiphi indlela.
Usayizi omaphakathi walolu hlobo ngamakhilogremu angama-65-75 kwabesilisa, namakhilogremu angama-55-65 kwabesifazane.
Ukuphakama kwabesilisa kumaphakathi ngamasentimitha angu-17-19 ngenkathi abesifazane bancane kancane ngamasentimitha angu-16-18.
Ngokuvamile zibhekwa njengezinja eziphakathi nendawo ezinkulu ngokuya ngosayizi wazo ophelele.
Ama-Victorian Bulldogs eza ngemibala ehlukahlukene kufaka phakathi:
Azikaze zibe mnyama, noma iyiphi inhlanganisela emnyama nomunye umbala.
AmaVictorian Bulldogs anamajazi amafushane kakhulu aqondile, ajwayelekile kubazala bawo baseBulldog.
Uboya bugqokiwe futhi buminyene emzimbeni wonke. Umbala uyahlukahluka kakhulu kepha okuvame kakhulu nokufunwayo kubomvu noma mhlophe.
Bachitha ubuningi bezinwele, kepha banenkathi esindayo yokuchitha isikhathi kabili ngonyaka.
Ukuxubha nokuzilungisa njalo kungasiza ukugcina ukuchitha okungenani kepha ngeke imise ngokuphelele.
Ukugcina umngani wakho onoboya ehlanzekile futhi enethezekile, kunconywa ama-brushings amahlandla amabili ngeviki anebhulashi elithambile.
Amabhavu agcwele adingeka cishe kanye ngenyanga noma njalo lapho inja yakho ingcola, kepha ungalinge ugeze ngaphezu kwesisodwa ngesonto ukugwema isikhumba esomile, esilumayo.
Izinwele zezinwele azidingeki kulolu hlobo njengoba zinoboya obufushane kakhulu obungeke bukhule bube bude.
Yize imibimbi yeVictorian Bulldog ingejulile, kusabaluleke kakhulu hlola futhi uzihlanze njalo ukuvimbela ukutheleleka okwakhayo nokwanda kwesikhumba ukuthi kungenzeki emiqulwini.
Ukuxubha amazinyo enja yakho okungenani izikhathi ezingama-2-3 isonto libalulekile ukugcina impilo yenja yakho yamazinyo futhi ugweme izindleko ezibizayo ze-vet.
Ngokungafani nabazala babo baseNgilandi, iVictorian Bulldog idinga ukunakekelwa okuncane kakhulu ukuze ijabule futhi ibe nempilo.
Kodwa-ke, abathandi ukushiywa bodwa, futhi badinga umzamo omkhulu wokuqeqesha, ngakho-ke kungenzeka bangabi njalo efanelekile okokuqala kubanikazi bezinja.
Ukondla i-Victorian Bulldog yakho kuqondile.
Zenza kahle kunoma yikuphi ukudla kwezinja ezisezingeni eliphakeme noma ngabe: zomile, ziluhlaza noma zimanzi.
Kodwa-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi ungadli ngokweqile noma unikeze ukuphatha okuningi kakhulu kulolu hlobo njengoba kungakhuluphala kalula futhi kube nezinkinga ezihlangene phakathi kwezinye izinto.
Kungcono ukuhlukanisa ukudla kosuku kube ukudla kabili kwenkomishi le-¾-1, okukodwa ekuseni okunye ebusuku.
Lokhu kungcono ohlelweni lwabo lokugaya ukudla futhi kubagcina bejabule ngezikhathi zokudla. Njengoba yonke inja yehlukile, kuhlale kunconywa ukuthi uthintane nodokotela wezilwane mayelana nezindlela zokudla ezingcono kakhulu ze-pooch yakho.
Amaminithi Imizuzu engama-20 kuya kwengama-30
Yize lolu hlobo lungadlala kakhulu, nakanjani bathanda impilo ehamba kancane.
Ukuhamba ngemizuzu engama-20 kuye kwangama-30 kanye noma kabili ngosuku konke okudingekayo ukwanelisa izidingo zabo zokuzivocavoca umzimba .
Lokhu kubenza bakwazi ukuzivumelanisa kalula nokuhlala efulethini noma ekhaya elincane.
Bangase bangabi abagibeli abahamba phambili, kodwa inja yakho izothanda ukuxosha amabhola noma ama-frisbees ngaphandle. Ukubhukuda okugadiwe (okuhle ngejakhethi yempilo) nakho kuyindlela enhle yokuzivocavoca umzimba abangayithokozela.
Lapho uphuma uyobhukuda, amahanisi afakwe kahle futhi i-leash inconywa ukugcina inja yakho ilawulwa.
Lapho uqala ukuqeqesha iVictorian Bulldog yakho, kubalulekile ukuqala kusenesikhathi nokwenza inqubo.
Imvelo yabo eqotho nenothando iboleka ngokuphelele izindlela ezinhle zokuqinisa. Ukuqeqeshwa kwe-Clicker kungaba yindlela enhle ukufundisa inja yakho imiyalo eyisisekelo ngenkathi ugcina ukuqeqeshwa kuyinto enhle.
Le Bulldog ihlakaniphile kakhulu futhi izosizakala ngempela emidlalweni ye-puzzle nakuma-borest busters.
Indlela enhle yokubenza bajabule ngenkathi uphumile ukufaka into yokudlala iphazili ngengxenye yokudla bese ubanika yona lapho uphuma endlini.
Umehluko omkhulu weVictorian Bulldog ovela kubazala babo abangamaNgisi ukungabi bikho kwabo kwezempilo.
Kuluhlobo olunempilo, futhi ngokunakekelwa okufanele nokuvakashelwa udokotela wezilwane njalo, kufanele ukwazi ukujabulela inja yakho ngezinkinga ezimbalwa.
Kodwa-ke, usayizi wabo oyisitoko usabenza bathambekele kwi-hip kanye ne-elbow dysplasia kanye nokuzuza kwesisindo.
Yize i-hip dysplasia akuyona into engavinjelwa , ukuqapha ngokucophelela ukuthi inja yakho idle kangakanani kungagcina isisindo sayo silawulwa.
Ngokwengeziwe, la maBulldog azwela kakhulu ekushintsheni kwezinga lokushisa njengoba ekwazi ukushisa kalula futhi abe nenkinga yokuphola.
Uma uhlala endaweni lapho isimo sezulu esibi sivamile, le canine akuyona eyakho.
IVictorian Bulldog luhlobo oluqotho nolunothando olufanele umuntu noma umndeni onesikhathi esiningi nothando lokukunikeza lolu hlobo olumangalisayo.
Cishe akuzona izinhlobo zakho uma kungokokuqala ukuqeqesha inja noma uma uhlala endaweni eshisayo noma ebandayo ikakhulukazi.
Imnene, iyadlala, futhi iyazivikela, lena inja enhle ongayengeza emndenini okhulayo.
Yize bekuthanda ukuphumula, ukuzivocavoca okusesilinganisweni nokuvuselela ingqondo ngaphakathi noma ngaphandle kubalulekile ukugcina umngani wakho omusha enempilo futhi elungile.
Ngakho-ke, uma ukwazi ukuhlinzeka ngekhaya elinothando, uzothola ukuthi unomngane omkhulu oyisilima, omusha omuhle kakhulu.
I-Mountain Cur 101: Inja Ephelele Yomuntu Othanda Ukuzijabulisa Ongaphandle Nangaphandle
amagama amahle elebhu loshokholethi
lonke uhlobo lwama-pit bull luzala
umalusi waseJalimane omnyama no-tan onezinwele ezinde
ibukeka kanjani i-labrador yesiliva
umalusi omnyama nobomvu waseJalimane